I-amazon prime video ye-android tv ayizukufumana & apos; t ziya kufumaneka ngokubanzi nanini na kungekudala
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Amazon Prime Video ye-Android TV ayizukufumana ngokubanzi nanini na kungekudala
I-Amazon Prime Video ye-Android TV ayizukufumana ngokubanzi nanini na kungekudala
IAmazon neGoogle ibhengezwe kwinyanga ephelileyo ukuba usetyenziso olusemthethweni lweYouTube luya kufumaneka kwizixhobo zeTV yoMlilo kwaye iNkulumbuso yeVidiyo iya kukhutshelwa ngaphandle kwi-Android TV nakwiChromecast. Ngelishwa, ukuba awukabinako ukukhuphela iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon kwiTV yakho ye-Android okwangoku, amathuba okuba awuzokuphumelela kwaye awuzokwazi ukwenza njalo nangaliphi na ixesha kungekudala, nasi isizathu.
Kukhangeleka ngathi uGoogle akazukuyenza i-Amazon Prime Video ukuba ifumaneke ngokubanzi kwiVenkile yokudlala, 9to5google iingxelo. Umxhasi uya kutyhilwa ngaphandle kwi-OEM ngesiseko se-OEM, oko kuthetha ukuba konke kuya kumenzi wakho we-TV ye-Android ukwenza usetyenziso lweVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon ikhutshelwe.
U-Hisense ngomnye wabavelisi bokuqala be-TV esele bathumele i-app entsha yeAmazon Prime Video kwezinye zeTV zayo ze-Android, njengoko kubonisiwe ngumsebenzisi weReddit IzikoUlou . Uhlaziyo oluqulathe Inkulumbuso yeVidiyo yongeza kwakhona isikrini esitsha sokuqalisa kunye nokhuseleko ngoJuni xa ufuna ukwazi.
Inkqubo ye-Prime Video iyakwenziwa ifumaneke kwiVenkile kaGoogle yokuDlala ukuba kwaye xa ii-OEMs zithathe isigqibo sokuyikhuphela ngaphandle, ke akukho & ampos; akukho nto ingako ungayenza ngaphandle kokulinda kwaye unethemba lokuba umenzi wakho weTV ye-TV uza kuyikhupha usetyenziso kungekudala kamva.
I-samsung tab s7 umhla wokukhutshwa
yintoni imenyu efihliweyo
Ezona fowuni zibalaseleyo ngo-2021
I-Newfangled Verizon 5G yokugubungela kwiJersey Shore ifumana uvavanyo lwesantya kwaye iphumelele ... elunxwemeni
Eyona midlalo mikhulu yoMdyarho ye-iPhone, i-iPad kunye ne-Android
INtloko yeQA-iiNdima noXanduva
Nalu uluhlu olupheleleyo lweeVenkile zeApple apho ungathenga khona uHlaziyo lweWatch Apple xa usungulwa